'१८ करोड लगानी गरेर फोहोरबाट ग्याँस उत्पादन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई दियौं' - Aarthiknews
'१८ करोड लगानी गरेर फोहोरबाट ग्याँस उत्पादन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई दियौं'
धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जु नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष पनि हुन् । एक गतिमान् जनप्रतिनिधिका रुपमा उनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको संयुक्त नगर स्थानीय सरकारको अध्यक्षता पनि गरेको छ । संविधान दिवसका अवसरमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र अभ्यासमा देखिएका समस्याबारे रससले उनीसँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेपः
नेपालको संविधानले पहिलोपटक स्थानीय तहलाई संवैधानिक बनाएको छ । संवैधानिक सरकार स्वायत्त हो, विधिमा चल्नुपर्छ, चल्ने चलाउने विषयलाई प्रमुखता दिएर अघि बढ्दा हिजोको तुलनामा सजिलो हुन्छ । आर्थिक, विधि–विधान, योजनाको कार्यान्वन र अधिकारको विकेन्द्रीकरणको स्वायत्तता सजिलो छ । छिटोभन्दा छिटो विकासको काम जनतालाई सेवा दिन नीतिगत रुपमा टुङ्गयाउन सजिलो छ ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार स्थानीय तहमा छ, स्थानीय सरकारले आठ–दश वर्षका बीचमा नेपालमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना देखाएको छ । यसो भए पनि हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, विकास कार्यक्रमको पहिचान गरी योजनाबद्ध ढाँचामा परिवर्तन गर्नका लागि ज्ञानको वृद्धि गर्नुपर्ने महसुस भएको छ । प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षलाई कुन बेला कहिले के योजना बनाउने, कहिले सम्पन्न गर्ने, यसका लागि हाम्रो तहगत जिम्मेवारीका विषयमा बाँडफाँट गर्दा प्रशासनिक संयन्त्र र प्राविधिक पक्षबाट स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्ने सम्भावना छ ।
राज्य शक्तिको बाँडफाँटभित्र सङ्घ सरकारले के गर्ने, प्रदेशले र स्थानीयले के गर्ने भनेर एकल अधिकार छन् र साझा सूची पनि छन् । ती अधिकार पाँच क्षेत्रमा बाँडिएको बाहेक, नयाँ क्षेत्र देखियो भने संविधानमा अवशिष्ट अधिकारको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिने भन्ने व्यवस्था छ ।
सङ्घीयताको सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र हेर्दा हाम्रो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने तीन तहमा संविधानले राम्रो व्यवस्था गरेको छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँटभित्र सङ्घ सरकारले के गर्ने, प्रदेशले र स्थानीयले के गर्ने भनेर एकल अधिकार छन् र साझा सूची पनि छन् । ती अधिकार पाँच क्षेत्रमा बाँडिएको बाहेक, नयाँ क्षेत्र देखियो भने संविधानमा अवशिष्ट अधिकारको पनि व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यस आधारमा हेर्दा हाम्रा संविधानमा केही विषय स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारका अधिकार क्षेत्र बाझिएका छन् । दोहोरोपन पनि छ ।
त्यहाँ स्रोतको मात्र हैन अधिकार क्षेत्र पनि बाझिएका छन् । बाझिएका क्षेत्रको अधिकारका विषयमा टुङ्गयाउन बाँकी नै छ । संविधानले तोकेको कार्य क्षेत्रभित्र कानून बनाउँदा कहाँ कसको जिम्मेवारी छ भन्ने हुन्छ र सिद्धान्तले एकल अधिकार स्वयं सरकारको अधिकार हो भन्छ । साझा सवालका विषयमा तीन तहको सरकारको समन्वय, साझेदारी र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने, कुन सरकारलाई के काम दिँदा प्रभावकारी हुन्छ, जनताले बढीभन्दा बढी सेवा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आधारमा टुङ्गिनुपर्छ । यो सङ्घ सरकारले त्यो साझा सूचीको काम नबनाउने र तीनै तहको सरोकार निकायका बीचमा परामर्श गर्ने काम नगरेका कारणले समस्या सिर्जित भएको हो ।
धुलिखेल नगरपालिकाले ३६ वटा ऐन र पाँच वटा कार्यविधि बनाई पारित गरिसकेको छ । थप केही ऐन बनाउँदै पनि छौँ । हामीले विशेष गरी नगरलाई दिनानुदिन कार्य सञ्चालन गर्नलाई सजिलो हुने गरी कानून बनाएका छौँ । सबैले बुझ्न सजिलो होस् भनेर ती सबै कानूनको सङ्ग्रह नै सार्वजनिक गरेका छौँ । विशेष गरी खानेपानी क्षेत्रमा पाँच वर्षमा सबैको घरमा स्वस्थ पानीको धारा पुगेको शहरको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ऐन पनि बनेको छ, यो नेपालकै अनुपम छ । त्यसमा प्रत्येक वडामा बोर्ड हुन्छ । खानेपानी योजनाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, महसुल निर्धारण, मर्मतसम्भार गर्ने र एक घर एक धारा सदस्य बनाई समुदायले सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छ ।
तीन तहकै सरकारले कतिपय कानून बनाउनुपर्नेछ । संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारको कार्यसम्पादन गर्न कानून निर्माण गर्ने काम, राजश्व परिचालन गर्ने काम, जिम्मेवारीको क्षेत्र एकअर्काले हस्तक्षप नगर्ने गरी स्वतन्त्र रुपमा हुने हो भने हाम्रो सङ्घीयताले मूर्त रुप लिन्छ ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको छ, जमीन खण्डीकरण नियन्त्रण र शहरको मौलिकता÷सम्पदालाई जोगाउन कस्तो कानून र रणनीति बनाउनुभएको छ ?
नेपालको पहिलो स्वस्थ शहर बनाउने उद्देश्यले अभियान शुरु गरेका छौँ । यसअन्तर्गत प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य कार्यालय निर्माण गरिएको छ । पाँच वटा सूचक बनाएर उद्योगलाई प्रदूषणमुक्त, विषादिमुक्त बनाउने हाम्रो योजना छ । जनस्वास्थ्यमा प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक सेवामा पनि ध्यान दिएका छौंँ । हरित नगरका रुपमा विकास गर्न प्रतिवर्ष एक लाख बिरुवा रोप्ने, युवा वर्गलाई शरीर मात्र नभई मानसिक र सामाजिक रुपमा पनि कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने उद्देश्यले परियोजना आफैँ पहिचान गरी ल्याएका छौँ । यसका लागि प्रदेश सरकारबाट पनि केही अंशमा सहयोग प्राप्त भएको छ ।
भूउपयोगको नीति अबलम्बन गर्दै कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, आवास र वन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रणालीमा गयाैं भने हामीले हाम्रो शहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्ने तथा सबै शहरी आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्छौँ । तीन तहका सरकारको विकासमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती गरेर व्यवस्थित शहर बनाउनेतर्फ लाग्न सक्छौँ ।
यस वर्ष पनि थप २२ वटामा जोडिने छ । नगरको प्रशासनिक, आर्थिक मामला र शासन पद्धतिलाई इगभर्नेन्समा लैजाने प्रक्रिया शुरु भएको छ । नगरको कार्यप्रणाली खास गरी कर, सूचना र सञ्चारलाई स्मार्ट गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
स्मार्ट सिटीको विषयमा दुईटा कोणबाट काम गरिरहेका छौँ । नेपाल सरकारले १० वटा स्मार्ट सिटी बनाउने शहरमध्ये धुलिखेल पनि छ । यसका लागि हाल रु पाँच करोड विनियोजन भएको छ । धुलिखेल, बनेपा र पनौतीको लागि गुरुयोजना बनाउँदैछौँ । अर्को, धुलिखेल नगर आफैँले स्मार्ट सिटीको उद्देश्य जनतालाई सेवा पु¥याउने क्षेत्रअन्तर्गत आजको डिजिटलाइजेशनसँंग जोड्ने हो । यसका लागि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको धुलिखेल नगरको पहिलो एप्स छ ।
यसमा नगरका सबैखाले सूचना र गुनासो पाउनुहुन्छ । यसमा कर तिर्ने प्रक्रियामा जाँदैछौँ । छ वटा वडामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइसकेका छौँ । सार्वजनिक चोक, गल्ली, ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रमा सिसी क्यामेरा जोड्दैछौँ । अनुगमन प्रणाली छ । पर्यटकलगायत सामान्य मानिसले समेत प्रविधिको उपयोग गरी फाइदा लिन सकून् भन्ने उद्देश्यले २२ वटा स्थानमा निशुल्क वाइफाई जोडेका छौँ । यस वर्ष पनि थप २२ वटामा जोडिने छ । नगरको प्रशासनिक, आर्थिक मामला र शासन पद्धतिलाई इगभर्नेन्समा लैजाने प्रक्रिया शुरु भएको छ । नगरको कार्यप्रणाली खास गरी कर, सूचना र सञ्चारलाई स्मार्ट गराउने उद्देश्य राखिएको छ ।
दुःख कसैले दिएकोे छैन । समाजले पूरै समन्वयात्मक सहयोग गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकामा पाँच अर्ब रुपियाँको ‘धुलिखेल ड्रिमल्याण्ड प्रोजेक्ट’ बनाउँछु भनेको । लगानी बोर्डमा पनि पास भएको छ । त्यो नेपालको पहिलो ‘इम्युजियम पार्क’ हुन्छ । छयहत्तर रोपनीमा प्लान बनाएको छु तर लगानीकर्ता आएको छैन । यसै कार्यकालमा सकिएला जस्तो छैन ।
अर्को, मेडिसिटी अस्पताल बनाउने योजना छ । यसका लागि आठ अर्ब रूपियाँ चाहिन्छ । धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरको ठूलो समस्या फोहोर व्यवस्थापन छ । एकीकृत ढङ्गले अघि बढौँ भनेर ४३ करोड अमेरिकी डलरको योजना तयार भएको छ तर लगानीकर्ता आएको छैन । अहिले आफैंले १८ करोड रुपियाँ लगानी गरेर फोहोरबाट ग्यास उत्पादन गर्ने भनेर निजी क्षेत्रलाई दियौँ । विश्व बैंकले ४० प्रतिशत लगानी गर्ने भएको छ, त्यो सफल भयौँ भने यहीँ ग्यास हुन्छ, यहीँ मल हुन्छ ।
हामीले विश्वका अन्य देशबाट राजनीतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक कुराहरु सिक्ने हो । उनीहरु साझेदारीमा काम त गर्छन् तर आर्थिक मामिलामा उनीहरुसंँग साझेदारी गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ । सीप आदानप्रदान गर्ने मात्रै हो । भगिनी सम्बन्ध भनेको आत्मिक सम्बन्धमा रहने हो, आर्थिक लेनदेनले हामीलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
न्यायिक समितिसमक्ष आएका मुद्दाहरु कसरी छिनोफानो गर्नुभएको छ ? यसको प्रभावकारिता कस्तो पाउनुभएको छ ?
स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । समावेशिताका कारण महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रहेको छ । उपप्रमुखलाई एक समितिको संयोजक मात्रै नभएर नौ समितिको संयोजक बनाइएको छ ।
योजना, राजश्व परामर्श, बजेट बनाउनेलगायतको संयोजक बनाएर राम्रो काम गरिएको छ । न्याय समितिलाई संविधानले नै मेलमिलापको माध्यमबाट १३ वटा विवाद मिलाउने र ११ फैसला गर्न सक्ने किटान गरेकाले यो यो गर्न पाउने भनी अध्ययन गर्ने गरेका छौँ । केही जटिलता छन् भने मेयरसँग परामर्श लिने गर्छु । झण्डै १४० वटा मुद्दा/विवाद आएकोमा ८० भन्दा माथिको मेलमिलाप र फैसलाबाट समाधान भएका छन् ।